ANY ARE B AND NA ANY L B L HANUKEII
Anyị bụ ihe anyị na-ebi ma na-ebi ndụ anyị bụ. Hanukeii o siri ike nghọta ịkọwa mana ọ dị mfe nghọta ma ọ bụrụ na ọ dị gị. Ọ bụ mmetụta a na-apụghị ịkọwa akọwa, nke na-eme ka ị sụọ ude na oge ahụ kpọmkwem, nke ị na-emecha mata na a hapụrụ nchekasị gị wee bido nwee obi ụtọ na-ekpori ndụ oge dị mma.
Ndụ ụkwụ ọtọ
Hanukeii Ọ bụ mmetụta ahụ ị na-enweta mgbe ị yipụrụ akpụkpọ ụkwụ gị, gbanye ogologo ọkpa gị ma jee ogologo ije n'ụsọ osimiri. Ọ bụ oge ebe nsogbu, mkpọtụ, nrụgide na nchekasị gị na-agwụla n'okirikiri. Hanukeii Ọ bụ n'oge ahụ ka ị na-ekpu ụtọ ndụ ọzọ. Bụ oge gị.
ANY FE NA-EKWU
Hanukeii Enwere ike inwe mmetụta n'ọtụtụ ebe, mana ịga ije na ájá nke ụsọ osimiri, n'akụkụ osimiri, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume ịghara inwe mmetụta. Anyị nwere obi ụtọ, anyị hụrụ ndụ n'anya, anyị na-amasị agba na anyi bu ndi choro oge Hanukeii.
Ọ bụ ezie na anyị hụrụ ihe dị mkpa na ezigbo n'anya, anyị ka nọ n'ọgbọ dijitalụ yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta anyị, ị nwere ike zitere anyị ozi n'ụdị a ma anyị ga-aza gị ozugbo enwere ike.